DEG DEG: Qarax ka dhacay garoonka diyaaradaha Kabul - Caasimada Online
Home Dunida DEG DEG: Qarax ka dhacay garoonka diyaaradaha Kabul
DEG DEG: Qarax ka dhacay garoonka diyaaradaha Kabul
Kabul (Caasimada Online) – Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey in qarax weyn uu ka dhacay banaanka garoonka diyaaradaha Kabul ee dalka Afghanistan, halkaasi oo ay weli ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo NATO.
“Waxaan xaqiijin karnaa in qarax uu ka dhacay banaanka garoonka diyaaradaha. Weli ma cadda khasaraaha. Dib ayaan akhbaaraad dheeri ah kasoo sheegi doonnaa,” waxaa sidaas yiri afhayeenka Pentagon-ka John Kirby.
Sarkaal kale oo Mareykan ah ayaa xaqiijiyey in qaraxa uu fuliyey qof is-miidaamiyey.